Top 20 saina lehibe indrindra amin'ny fotoana rehetra - Victor Mochere
Hatramin'ny niandohan'ny sivilizasiona olombelona, ​​ny tantara dia nanatri-maso ny fipoiran'ireo saina tena lehibe izay namela marika tsy azo kosehina. Ireo olo-malaza niavaka teo amin’ny sehatry ny siansa, matematika, filozofia, zavakanto, ary literatiora dia nanankarena ny tantaran’ny olombelona tamin’ny fomba maro. Na dia nanatsotra ny fiainantsika tamin’ny alalan’ny fampivelarana teknolojia mahasoa aza ny sasany amin’ireo saina lehibe ireo, ny sasany kosa dia nandray anjara tamin’ny siansa ara-pitsaboana, ka nahatonga antsika hanana fiainana salama kokoa. Ny fiaraha-monina sy ny sivilizasiona dia nandroso ho amin'izao misy antsika ankehitriny noho ny asa izay nananan'ireo visionaries ireo ary koa ny maro hafa izay nanaraka ny diany.
Ireto ny saina 20 ambony indrindra teo amin'ny tantara.
Michael Faraday dia mpahay siansa anglisy izay nandray anjara tamin'ny fandalinana ny electromagnetism sy electrochemistry. Ny zava-bitany lehibe indrindra dia ahitana ny foto-kevitra fototry ny induction electromagnetic, diamagnetism ary electrolysis. Izy no isaina ho iray amin'ireo mpahay siansa nanan-kery indrindra teo amin'ny tantara. Albert Einstein dia voalaza fa nahazo aingam-panahy lalina tamin'i Faraday.
Nikola Tesla dia mpamorona Serba-Amerikana, injeniera elektrika, injeniera mekanika ary futurista fanta-daza indrindra amin'ny fandraisany anjara amin'ny famolavolana ny rafitra famatsiana herinaratra ankehitriny (AC). Betsaka ny zava-bitany satria nanana patanty 300 teo ho eo tamin’ny anarany tany amin’ny firenena 26 samihafa izy. Tesla ihany koa no namorona ny fanaraha-maso lavitra voalohany, ny x-ray voalohany, ary nanampy tamin'ny famoronana ny orinasa mpamokatra herinaratra voalohany.
Archimedes of Syracuse dia mpanao matematika, mpahay fizika, injeniera, astronoma, ary mpamorona mizaka ny zom-pirenen'i Grika teraka ny XNUMX Janoary XNUMX tao Syracuse Izy dia heverina ho iray amin'ireo mpahay siansa malaza amin'ny fahagola klasika. Archimedes no olona voalohany nampiasa matematika ampiharina amin'ny famaritana ny tontolo fizika. Izy, ohatra, dia nahita sy namolavola ny lalàn'ny lever sy pulleys, izay mamela antsika hamindra zavatra tena mavesatra amin'ny hery kely kokoa.
Noheverina ho mpahay matematika lehibe indrindra teo amin'ny tantara fahiny, ary iray amin'ireo lehibe indrindra tamin'ny fotoana rehetra, i Archimedes dia niandrandra ny kajy sy ny famakafakana maoderina amin'ny fampiharana ny foto-kevitra momba ny kely tsy manam-petra sy ny fomba harerahana mba hahazoana sy hanaporofoana amin'ny fomba hentitra ireo teôrema geometrika, anisan'izany. : ny velaran'ny faribolana; ny velaran-tany sy ny haben'ny sphere; faritra misy ellipse; ny faritra ambanin'ny parabola; ny habetsaky ny ampahany amin'ny paraboloida amin'ny revolisiona; ny habetsaky ny ampahany amin'ny hyperboloid ny revolisiona; ary ny faritry ny spiral.
Hitany ihany koa ny lalàn'ny fanetsiketsehana izay mamela ny sambo vy lehibe hijanona ao anaty ranomasina. Archimedes koa no voalohany nampiasa exponent amin'ny matematika mba hanoratana sy hamaritana isa lehibe kokoa. Nahazo tombana marina momba ny pi izy. Izy angamba no malaza indrindra amin'ny famoronana milina ady mahatsiravina izay nisakana ny Romanina fahiny tsy hisambotra an'i Syracuse nandritra ny taona maromaro.
Sir Isaac Newton dia matematika anglisy, mpahay fizika, astronoma, alchemista, teolojiana, ary mpanoratra (nofaritana tamin'ny androny ho “filozofa voajanahary”) fantatra fa iray amin'ireo mpahay matematika sy fizika lehibe indrindra hatramin'izay ary anisan'ireo mpahay siansa nanan-kery indrindra. Izy dia olo-malaza tamin'ny revolisiona filozofika fantatra amin'ny anarana hoe Fahazavana.
Ny bokiny Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica (Principles Matematika momba ny Filozofia Voajanahary), nivoaka voalohany tamin'ny 1687, dia nanangana mekanika klasika, manazava ny lalàn'ny sinton'ny tany sy ny lalàn'ny fihetsehana. Ny lalàna telo momba ny fihetsehan'i Newton dia nisy fiantraikany bebe kokoa tamin'ny siansa noho ny asa hafa rehetra. Ireo lalàna ireo dia nitarika tamin'ny fikarakarana ny sinton'ny tany ho toy ny hery manerantany, nitarika ny fahitana planeta, ary tamin'ny farany dia nankany amin'ny habakabaka.
Nandray anjara betsaka tamin'ny optique ihany koa i Newton, ary nizara crédit tamin'i Gottfried Wilhelm Leibniz, mpahay matematika alemà, noho ny famolavolana kajy faran'izay bitika, izay afaka mamaha olana maro momba ny siansa, toekarena ary injeniera izay tsy hain'ny algebra. Izy no namorona ny teleskaopy mitaratra, no voalohany nandrava taratra hazavana ho loko tamin'ny fampiasana prisma.
Alan Mathison Turing dia mpanao matematika anglisy, mpahay siansa momba ny informatika, mpahay lojika, cryptanalyst, filozofa, ary biolojista teorôtika. Turing dia nanan-kery lehibe teo amin'ny fampiroboroboana ny siansa informatika teorika, nanome endrika ny foto-kevitry ny algorithm sy ny kajy miaraka amin'ny milina Turing, izay azo raisina ho modely amin'ny ordinatera amin'ny tanjona ankapobeny. Heverina ho rain'ny siansa momba ny informatika sy ny faharanitan-tsaina artifisialy izy.
Leonardo di ser Piero da Vinci dia polymath italiana tamin'ny Renaissance Avo izay navitrika ho mpanao hosodoko, mpanao sary, injeniera, mpahay siansa, teorista, mpanao sary sokitra ary mpanao mari-trano. Sarotra ny mahita olona hafa teo amin'ny tantara izay manana fahaizana bebe kokoa amin'ny faritra maro kokoa noho ny Da Vinci. Polymath ambony indrindra, i Da Vinci dia nanadihady momba ny anatomie, astronomia, botanika, cartography, hosodoko ary paleontolojia.
Mpanakanto, mpanao sary sokitra izy ary noheverina ho nanana eritreritra sy fahaiza-mamorona hevitra tsy mbola nisy toy izany. Nolazaina tamin'ny famoronana sy ny fikarohana siantifika tsy tambo isaina izy. Namorona fiara mifono vy, ohatra, izy 400 taona talohan’ny naha-zava-misy azy. Izy no nanamboatra ny Knight mekanika izay fantatra amin'ny anarana hoe robot Leonardo. Izy no nanamboatra ny mpialoha lalana ny akanjo antsitrika ankehitriny.
Ary noheveriny koa ny parachute, ny helikoptera ary ny fitaovam-piaingana alohan'ny fotoanany. Ao amin'ny anatomie, i Da Vinci dia nanao fandalinana amin'ny antsipiriany indrindra momba ny vatan'olombelona natao hatramin'izay. Talohan'ny taonjato faha-20, ny fianarany dia nitarika fikarohana maromaro teo amin'ny sehatry ny anatomia. Ao amin'ny zavakanto, Da Vinci dia noheverina ho iray amin'ireo mpanao hosodoko lehibe indrindra hatramin'izay. Izy angamba no namorona ny sary hosodoko malaza indrindra teo amin'ny tantara rehetra fantatra amin'ny anarana hoe Mona Lisa.
Pythagoras of Samos dia filozofa grika Ioniana fahiny ary mpanorina ny Pythagoreanism. Nalaza be tao amin’ny Magna Graecia ny fampianarany ara-politika sy ara-pivavahana ary nisy heriny teo amin’ny filozofian’i Platon sy Aristote ary, tamin’ny alalan’izy ireo, ny filozofia tandrefana. Nomen'i Platon i Pythagoras fa manana hevi-dehibe maro momba ny matematika, siansa, etika ary filozofia. Ary koa ny fanomezan-danja amin'ny teorema matematika.
Albert Einstein dia mpahay fizika teorika teraka tany Alemaina, nekena ho iray amin'ireo mpahay fizika lehibe sy nanan-kery indrindra hatramin'izay. Einstein no malaza indrindra amin'ny fampivelarana ny teoria momba ny relativité, saingy nandray anjara lehibe tamin'ny fampandrosoana ny teoria momba ny mekanika quantum koa izy. Ny relativité sy ny mekanika quantum dia samy andry roa amin'ny fizika maoderina.
Ny asany dia nanome porofo ara-tsiansa momba ny teoria atomika ary koa ny fisian'ny atôma sy ny molekiola. Izy koa no namaritra ny haben’ny molekiola ary nanamarina ny laharan’i Avogadro. Nantsoina hoe “equation malaza indrindra eran-tany” ny formula equivalence faobe-angovony E = mc2, izay nipoitra avy amin'ny teoria relativité. Ny asany dia fantatra ihany koa amin'ny fiantraikany amin'ny filozofia ny siansa.
Nahazo ny loka Nobel momba ny fizika tamin'ny 1921 izy "noho ny asany tamin'ny fizika teorika, ary indrindra noho ny fahitany ny lalàn'ny effet photoelectric", dingana iray lehibe amin'ny fampandrosoana ny teoria quantum. Ny zava-bitany ara-tsaina sy ny maha-izy azy dia nahatonga an'i "Einstein" ho lasa mitovy amin'ny "genius".
Max Karl Ernst Ludwig Planck dia mpahay fizika teorika alemà izay nahazoany ny loka Nobel momba ny fizika tamin'ny taona 1918 ny fahitana ny angovo quanta. Nandray anjara betsaka tamin'ny fizika teorika i Planck, saingy ny lazany amin'ny maha fizika azy dia miankina amin'ny anjara asany amin'ny maha mpamorona ny quantum. teoria, izay nanova ny fahatakaran'ny olombelona ny fizotry ny atomika sy ny subatomika.
Nicolaus Copernicus dia polymath Renaissance, mavitrika amin'ny maha-matematika, astronoma, dokotera, manam-pahaizana mahazatra ary mpahay toekarena, izay namolavola modely momba izao rehetra izao izay nametraka ny Masoandro fa tsy ny tany ho afovoany. Azo inoana fa i Copernicus dia namolavola ny modely tsy miankina amin'i Aristarchus avy any Samos, astronoma grika fahiny izay namolavola modely toy izany, taonjato valo ambin'ny folo talohan'izay.
Ny famoahana ny maodelin'i Copernicus ao amin'ny bokiny De revolutionibus orbium coelestium (Ny Revolisionan'ny Selestialy), talohan'ny nahafatesany tamin'ny 1543, dia zava-nitranga lehibe teo amin'ny tantaran'ny siansa, niteraka ny Revolisiona Copernican ary nandray anjara tamin'ny asan'ny mpisava lalana. Revolisiona siantifika. Tamin'ny 1517 dia nahazo teoria momba ny vola izy - foto-kevitra fototra amin'ny toe-karena - ary tamin'ny 1519 dia namolavola fitsipika ara-toekarena izay nantsoina hoe lalàn'i Gresham tatỳ aoriana.
Aristote dia filozofa grika sy polymath nandritra ny vanim-potoana klasika tany Gresy Fahiny. Ny asa sorany dia mirakitra lohahevitra maro ao anatin'izany ny fizika, ny biolojia, ny zoologie, ny metafizika, ny lojika, ny etika, ny estetika, ny tononkalo, ny teatra, ny mozika, ny kabary, ny psikolojia, ny linguistika, ny toekarena, ny politika, ny meteorolojia, ny jeolojia ary ny governemanta. Aristote dia nanome fitambarana be pitsiny ny filozofia isan-karazany nisy teo alohany. Ambonin'ny zavatra rehetra avy amin'ny fampianarany no nandovan'ny Tandrefana ny diksionera ara-tsaina, ary koa ny olana sy ny fomba famotopotorana.
Vokatr'izany, ny filozofiany dia nisy fiantraikany tsy manam-paharoa amin'ny saika ny karazana fahalalana rehetra any amin'ny Tandrefana ary mbola ho lohahevitra amin'ny adihevitra filozofika ankehitriny. Milaza mihitsy aza ny manam-pahaizana maro fa mety ho i Aristote no olona farany nahafantatra ny sehatra rehetra fantatra teto an-tany. Ireo fandraisana anjara amin'ny lohahevitra maro dia nahatonga an'i Aristote ho iray amin'ireo olona malaza indrindra hatramin'izay. Heverina ho iray amin'ireo olona manan-kery indrindra teto an-tany izy, ka manome fanazavana momba ny lafiny rehetra amin'ny fahalalan'olombelona.
Galileo di Vincenzo Bonaiuti de' Galilei dia astronoma, fizika, injeniera, mpanao matematika, ary filozofa italiana izay nitana anjara toerana lehibe tamin'ny Revolisiona Siantifika nandritra ny Renaissance. Nantsoina hoe “rain’ny astronomia fandinihana, fizika maoderina, fomba siantifika, ary siansa maoderina i Galileo.
Ny fandinihana nataony momba an'i Venus dia nanaporofo fa ny Masoandro no ivon'izao rehetra izao fa tsy ny tany. Hitany koa ireo volana lehibe efatra an’i Jupiter. Galileo no namorona ny thermoscope izay nanokatra ny lalana ho an'ny famoronana ny thermometer. Namorona tondro-miaramila mazava kokoa koa izy. Ary ny Galilian Invariance azy no nametraka ny fototry ny lalàn'i Newton momba ny fihetsehana sy ny teorian'i Einstein momba ny relativité.
Louis Pasteur dia mpahay simia frantsay sady manam-pahaizana momba ny mikrobiôlôjia nalaza noho ny fahitany ny fitsipiky ny fanaovana vaksiny, ny fermentation mikraoba ary ny pasteurization. Ny fikarohana nataony momba ny simia dia nitarika fandrosoana niavaka tamin'ny fahatakarana ny antony sy ny fisorohana ny aretina, izay nametraka ny fototry ny fahadiovana, ny fahasalamam-bahoaka ary ny ankamaroan'ny fitsaboana maoderina.
Ny sanganasany dia heverina ho nanavotra aina an-tapitrisany tamin'ny alàlan'ny fivoaran'ny vaksiny ho an'ny haromotana sy ny anthrax. Heverina ho iray amin'ireo mpanorina ny bakteria maoderina izy ary nomem-boninahitra ho "rain'ny bakteria" ary "rain'ny mikrobiolojia" (miaraka amin'i Robert Koch, ary ny epithet farany dia nomena an'i Antonie van Leeuwenhoek).
Marie Salomea Skłodowska Curie dia mpahay fizika, mpahay simia, Poloney Ny zava-bitany niavaka indrindra dia ny fahitana radium sy polonium. Curie no namorona ny andian-teny hoe "radioactivité" tany am-boalohany ary nanenjika azy io ho fanafody mety ho an'ny homamiadana. Izy no vehivavy voalohany nahazo ny loka Nobel, ary ny olona voalohany sy ny hany vehivavy nahazo ny loka Nobel indroa.
Izy ihany koa no hany nahazo ny loka Nobel amin'ny sehatra siantifika roa. Ny vadiny, Pierre Curie, dia mpiara-mandresy tamin'ny loka Nobel voalohany, nahatonga azy ireo ho mpivady voalohany nahazo ny loka Nobel ary namoaka ny lovan'ny fianakaviana Curie nahazo loka Nobel dimy. Tamin'ny 1906 izy no vehivavy voalohany lasa mpampianatra tao amin'ny Oniversiten'i Paris.
Charles Robert Darwin dia naturalista anglisy, geolojista ary biolojista, fantatra indrindra amin'ny fandraisany anjara amin'ny biolojia evolisiona. Ny fikarohana siantifika nataon'i Darwin dia ny teoria mampiray ny siansa momba ny fiainana, manazava ny fahasamihafan'ny fiainana. Ny tolo-kevitry ny hoe ny karazana zavamananaina rehetra dia avy amin'ny razambe iombonana dia ekena ary heverina ho foto-kevitra fototra amin'ny siansa. Voalaza fa anisan’ny olona nanan-kery indrindra teo amin’ny tantaran’ny olombelona izy.
Tao amin'ny famoaham-boky niarahana tamin'i Alfred Russel Wallace, dia nampiditra ny teoriany ara-tsiansa izy fa io lamin'ny evolisiona sampana io dia vokatry ny dingana iray nantsoiny hoe fifantenana voajanahary, izay misy fiantraikany mitovy amin'ny fifantenana artifisialy tafiditra amin'ny fiompiana voafantina ny tolona ho amin'ny fisiana. Namoaka ny teoriany momba ny evolisiona i Darwin, miaraka amin’ny porofo marim-pototra ao amin’ilay bokiny hoe On the Origin of Species, tamin’ny 1859. Tamin'ny taona 1870, ny fiarahamonina siantifika sy ny ankamaroan'ny olona nahita fianarana dia nanaiky ny evolisiona ho zava-misy.
Adam Smith dia mpahay toekarena sy filozofa Scottish izay mpisava lalana tamin'ny toekarena ara-politika sy olo-malaza nandritra ny Fahazavana Scottish. Antsoina koa hoe "Rain'ny Toe-karena" na "Rain'ny Kapitalisma", nanoratra asa malaza roa izy, The Theory of Moral Sentiments (1759) sy An Inquiry on the Nature and Causes of the Wealth of Nations (1776). Ity farany, izay matetika nohafohezina hoe The Wealth of Nations, dia heverina ho ny asany lehibe indrindra sy ny asa ara-toekarena maoderina voalohany.
Tao amin'ny asany dia nampiditra ny teoriany momba ny tombony tanteraka i Smith. Smith no nametraka ny fototry ny teoria ara-toekarena tsena malalaka. Ny Wealth of Nations dia nialohavan'ny taranja akademika maoderina momba ny toekarena. Tao anatin'ity asa ity sy ny asa hafa, dia namolavola ny foto-kevitra momba ny fizarana asa izy ary nanazava ny fomba mety hitondran'ny tombotsoa ara-drariny sy ny fifaninanana ho amin'ny firoboroboana ara-toekarena. Mbola mitana anjara toerana lehibe eo amin'ny toekarena maoderina ny asany.
Euclid, izay antsoina indraindray hoe Euclid avy any Aleksandria mba hanavahana azy amin'i Euclid of Megara, dia matematika grika, antsoina matetika hoe "mpanorina ny géométrie" na "rain'ny géometrika". Ny Elements dia iray amin'ireo asa manan-danja indrindra amin'ny tantaran'ny matematika. Ao amin'ny Elements, i Euclid dia nanatsoaka hevitra avy amin'ny axioms kely ny theorem ny antsoina ankehitriny hoe géométrie Euclidean. Euclid koa dia nanoratra asa momba ny fomba fijery, fizarana conic, géométrie spherical, teoria isa, ary henjana matematika.
Stephen William Hawking dia mpahay fizika teorika anglisy, cosmologista ary mpanoratra. Ny asa siantifika nataon'i Hawking dia nahitana fiaraha-miasa tamin'i Roger Penrose momba ny teôrema singularité gravitational ao anatin'ny rafitry ny relativité ankapobe, ary ny vinavina ara-teorika fa ny lavaka mainty dia mamoaka taratra, izay antsoina matetika hoe taratra Hawking.
Hawking no voalohany nametraka ny teoria momba ny cosmology nohazavain'ny firaisana amin'ny teoria ankapobeny momba ny relativité sy ny mekanika quantum. Izy dia mpanohana matanjaka ny fandikana ny tontolo maro momba ny mekanika quantum. Nahazo fahombiazana ara-barotra i Hawking tamin'ny asa maro momba ny siansa malaza izay niresahany ny teoria sy ny cosmology amin'ny ankapobeny.
Wolfgang Amadeus Mozart dia mpamoron-kira nalaza sy nanan-kery tamin'ny vanim-potoana klasika. Na dia teo aza ny androm-piainany fohy, ny hafainganam-pandehany tamin'ny famoronana dia niteraka asa maherin'ny 800 tamin'ny saika ny karazana rehetra tamin'ny androny. Maro amin'ireo sangan'asa ireo no ekena ho ambony indrindra amin'ny repertoire symphonic, concertante, chamber, operatique ary choral. Isan'ireo mpamoron-kira lehibe indrindra teo amin'ny tantaran'ny mozika tandrefana i Mozart, miaraka amin'ny mozika ankafiziny noho ny “kanto melodika, ny hakantony ara-pomba ofisialy ary ny haren'ny firindrana sy ny firafiny”.
Gottfried Wilhelm (von) Leibniz dia polymath alemà mavitrika amin'ny maha-matematika, filozofa, mpahay siansa ary diplaomaty. Izy dia olo-malaza eo amin'ny tantaran'ny filozofia sy ny tantaran'ny matematika. Nanoratra asa momba ny filozofia, teolojia, etika, politika, lalàna, tantara ary filôzôfia izy. Leibniz koa dia nandray anjara lehibe tamin'ny fizika sy ny teknolojia, ary niandrandra ny hevitra nipoitra taty aoriana tamin'ny teoria mety hitranga, biolojia, fitsaboana, jeolojia, psikolojia, linguistika ary siansa informatika.
Fanampin'izany, dia nandray anjara tamin'ny sehatry ny siansa momba ny tranomboky izy: fony izy mpiandraikitra ny tranomboky Wolfenbüttel any Alemaina, dia namorona rafitra fanaovana katalaogy izay mety ho mpitari-dalana ho an'ny tranomboky lehibe indrindra any Eoropa izy. Ny fandraisan'anjaran'i Leibniz ho an'ireo lohahevitra midadasika ireo dia niparitaka tao amin'ny gazety fianarana samihafa, tamin'ny taratasy an'aliny, ary tamin'ny sora-tanana tsy navoaka. Nanoratra tamin'ny fiteny maro izy, indrindra amin'ny teny latina, frantsay ary alemà, fa koa amin'ny teny anglisy, italianina ary holandey.